Alahady 21 Jiona 2020 – FPMA Toulouse
Serasera sy Firaiketana
Alahady 21 Jiona 2020
VAOVAO NASIONALY 22-06-2020
TARATASY FISAORANA AVY AMIN’I RAMATOA SEHENO RANDRIAMANANTSOA
Ry hava-malala rehetra ao amin’ny Tompo,
Misaotra an’Andriamanitra lehibe izahay fianakavian’Itompokolahy Pasteur Zozo Randriamanantsoa noho ny fitantanany sy ny fandaminany ny fiainanay.
Misaotra anareo ihany koa ny amin’ny fitrotroanareo am-bavaka an’i pasteur fony fahavelony, fony izy narary. Rehefa nodimandry izy dia mbola teo ihany koa ianareo naneho ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, ary nifanotrona ihany koa tamin’ny fanompoam-pivavahana niraisana ny 30 mai 2020 lasa teo ho fisaorana an’Andriamanitra sy ho fitondrana am-bavaka sy fampaherezana ny fianakaviana. Tsy nionona tamin’izany anefa ianareo fa mbola nanao tanana miara-milanja, soroka miara-milanja tamin’ny « cagnotte » izay avo roa heny ho fampodiana an-tanindrazana ny vata mangatsiakan’i pasteur.
Misaotra indrindra tompoko, tsy voavalinay mianakavy ny nataonareo fa ao Andriamanitra ilay Tompointsika hamaly fitia anareo rehetra.
Isaoranay manokana etoana koa ny fiangonana rahavavy maro izay naneho ny fiaraha-miory tamin’ny FPMA.
Ilay Andriamanitra Tompon’ny zavatra rehetra no hanonitra ny laninareo rehetra. Misaotra tompoko.
Manao veloma anareo izahay,
Ny voninahitra ho an’Andriamanitra irery ihany.
Ramatoa Seheno Randriamanantsoa.
TARATASY FISAORANA AVY AMIN’NY BIRAO FOIBE, FARITANY ATSIMO ATSINANANA, TAFO NICE
Hoy ny Soratra Masina: “ Miaraha mifaly amin’izay mifaly, miaraha mitomany amin’izay mitomany… Raha mijaly ny zavatra anankiray anisan’ny tena, dia miara-mijaly avokoa ny zavatra rehetra anisan’ny tena; fa raha omem-boninahitra ny zavatra anankiray anisan’ny tena, dia miara-mifaly avokoa ny zavatra rehetra anisan’ny tena.» Romana 12. 10,15: 1 Korintiana 12. 26.
Notanterahinareo izany, tamin’ny alalan’ny taratasy marobe nalefanareo sy ny antso an-tariby nataonareo ho fampaherezana anay, tamin’ny fitondranareo anay am-bavaka, tamin’ny fikarakaranareo sy ny fiombonanareo tamin’ny fanompoam-pivavahana nasionaly izay nanomezam-boninahitra an’Andriamanitra sy nitondràna am-bavaka ny fianakavian’i Pasteur Zozo Randriamanantsoa natao tamin’ny Asabotsy 30 Mey lasa teo, ary ny fahatongavanareo taty Nice tamin’ny fanompoam-pivavahana izay natao tamin’ny Alatsinainy 8 Jona tao amin’ny Chapelle ny Athanée, alohan’ny niaingan’ny razana nankany Madagasikara.
Ary ho mariky ny fiarahantsika mitondra izay mahavesatra, dia narahanareo vola aman-karena izany, tamin’ny fandraisanareo anjara tamin’ny “CAGNOTTE”, izay nentimanana ny fampodiana ny razana. Ny ambiny moa dia hatolotra amin’ny anaran’ny FPMA manontolo, ho fanampiana ny vady navelan’ny Mpitandrina sy ireo zanany kamboty.
Mba isian’ny mangaharahara dia indro omena anareo ny vola niditra sy nivoaka, anio 16/06/2020.
CAGNOTTE : 16201,14 €
TAXE 2,9 % (Leetchi) : 483,36 € (efa niala)
CHEQUES VOARAY: 5000,00 €
FACTURE POMPES FUNEBRES: 7204,84 € TTC
AMBINY : 13996,30 €
Ny fandevenana dia efa notanterahina tamin’ny Asabotsy faha 13 Jona lasa teo.
Maneho etoana ny fisaorana sy ny fankasitrahana anareo rehetra izahay, noho ny fanehoam-pitiavana nasehonareo. Indraminay ho anareo ny teny ao amin’ny Soratra Masina manao hoe: « Fa mitana ny toky nomeny ny Tompo, ka hampahery anareo sady hiaro anareo tsy ho azon’ilay Ratsy. Ary omen’ny Tompo fitokiana izahay ny momba anareo, ka azonay antoka fa ny zavatra ameperanay anareo dia efa ataonareo sady mbola hataonareo hatrany. » 2 Tesaloniana 3. 3-4
Mametraka anareo eo ambanin’ny fitahian’Andriamanitra mandrakariva
Mitaona antsika hanaraka ny fotoam-bavaka nasionaly
amin’ny 4 ora sy 7 ora hariva isan’andro
Ao https://fpma.church.news ny vaovao rehetra.
Zoma 25 Desambra 2020